नियमित रक्तदान सामाजिक दायित्व हो अध्यक्ष कर्माचार्य - City Post Daily
July 27, 2020 July 27, 2020 सिटी खबर
काठमाडौँ, १२ साउन । स्वाधिन नेपालका स्वाभिमानी नेपालीहरू रक्तदान गर्ने मात्र नभई यसको लागि आवश्यक प्रभावकारी अवधारणा समेत तयार गरि कार्यान्वयन गर्नमा लनशीलताका साथ लाग्न सक्ने गौरवशाली नेपाली भनि संसार माँझ परिचय दिनपनि पछि पर्ने छैन यसले । भनाइको तात्पर्य “म रक्तदान गर्नेछु ।“ मैले रक्तदान गर्न शुरू गरें ।“ “नियमित रक्तदान सामाजिक दायित्व हो ।“
यी वाक्यहरूले सार्थकता तवमात्र पाउँदछ,जब यसलाई व्यबहारमा उतार्न शुरू गरिन्छ । यीनै भनाई तथा आह्वानलाई कार्यान्वयन गर्न नेपालकै इतिहासमा नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजद्वारा प्रथम पटक आयोजित राष्ट्रिय स्वयंसेवी रक्तदाताहरूको भेलाबाट अनुमोदित start 18 stars team को अवधारणा हो ।
यो अवधारणा मात्र स्वयंसेवी रक्तदाता प्रेमसागर कर्माचार्यको नभई,नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजको मात्र पनि नभई,मात्र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा समेत सिमित नराखि,यसलाई नेपाली माटोमा सृजित नेपाल राष्ट्रकै अवधारणाको रूपमा विश्वव्यापी करण गर्दै जान जरुरी भईसक्यो ।
साँच्चै नै भन्ने हो भने यो अवधारणालाई कृयाशील भई ब्यबहारीकरण गर्दै लैजाने हो भने नियमित रक्तदान गर्ने स्वयंसेवी रक्तदाताहरूको एउटा उभारनै आउनेछ । भविष्यमा पीडित पक्षको होईन,रक्तदान गर्नेहरूको संख्यामा उल्लेख्य बृध्दि हुँदै जानेछ । यसले रगत र रगतबाट तयार पारिएका रक्त(तत्वहरूको आपूर्तिमा सहजता हुन आउने छ ।
नेपाली माटोको मौलिकता सहितको यो अवधारणालाई सत्य,तथ्यताका साथ नेपाल सरकार लगायत सम्बन्धित निकायद्वारा पूर्ण साथ,सहयोग समर्थन जनाई समर्पणभावका साथ कार्यान्वयनमा तदारूकता देखाउनमा समयलाई अवमूल्यन गर्नु भएन । बिषय बस्तुलाई आत्मासाथ गर्दै इतिहास निर्माणको क्रममा समर्पणको अहम् भूमिका हुने गर्दछ । त्यहि समर्पणले मात्र सफलता तर्फ दोहोय्रााउने छ । इतिहास भन्ने कुरा सकारात्मक र नकारात्मक दुबै किसिमका हुने गर्दछ । यो कुरा बिषयगत पक्ष बिपक्षमा निहित हुनेछ । संसारलाई आवश्यक मानव रगतको आपूर्तिमा सहजता हाँसिल हुने यो कर्ममा हामी किन बिलम्ब गरि बस्ने ? तसर्थ सत्कर्मले सकारात्मक इतिहास निर्माण हुन्छ भने हामीहरू यसतर्फ किन चुक्ने ?
हामी कहाँ सरकारी पक्षको उदासिनता र रक्त ब्यवस्थापनको अभिभारा बोकेका सम्बन्धित निकायको लाचारीपनले गर्दा कुनै खास ठोस योजना,परियोजना सहित देशभित्र सञ्चालित रक्त सञ्चार सेवा सहि तवरले सेवा प्रदान गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । समयसापेक्षताका साथ आवश्यकताको बोध गरि नयाँ नयाँ सोँचको बिकास गरि प्रभावकारी ढंगबाट सेवा सुबिधा उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ । दूरगामी सोँच चिन्तन बिनाका व्यक्तिहरूबाट सेवाग्राहीहरूले कतिसम्म हैरानी खेपी रहने त ? सम्बन्धित सरोकारवाला स्वयंसेवीहरू कहिलेसम्म उपेक्षित र आशावादी भएर बस्ने त ? कहिले सम्म स्वयंसेवी रक्तदाताहरूले सेवा प्रदानको नाममा हैरानी ब्यहोर्नु पर्ने हो ? यावत् कुराहरूको समाधानको लागि सम्बन्धित निकाय र नेपाल सरकार गम्भीर हुने की नहुने ?
हामी कहाँ हाल बिद्यमान रक्त व्यवस्थापन भनेको यो ’चल्नै पर्ने,चलि रहेछ’ भन्नु सिवाय अरू केही छैन । यसरी अत्यावश्यक सेवालाई कुनै पनि सम्बन्धित निकायको लाचारीपनाको कारण अरू सबैले आहत पाई रहनु कतिको शोभनिय कार्यरकुरा हो ? हामी नेपालीहरू प्रायस् बेवास्ता गरि बस्ने अनि ठूलै दुर्घटना घटेपछि होस्रचेत खुल्ने प्रबृत्तिका छौं । यो क्षेत्रमा पनि यस्तै परिस्थितिको अपेक्षा त गरिएको होईन ? यदि यस्तै हो भने दुर्भाग्यपूर्ण हुने छ । यस्तो अवस्था आउन नदिनको लागि सम्बन्धित निकायमा नेतृत्व लिई बसेकाहरूमा दूरगामी सोँच र चिन्तन हुन जरुरी छ । यसको लागि आवश्यक पहल कदमी सरकार र सम्बन्धित निकायले अविलम्ब गर्नु पर्दछ ।
हामी आज श्रावण १२ राष्ट्रिय रक्त सञ्चार दिवसको ५४औं वर्षगाँठमा छौं । देशमा सञ्चालित रक्त सञ्चार सेवाको स्थापनाकालदेखि हालसम्म आईपुग्दा रोजगारीलाई पनि ठूलै अवस दिएको पाईयो । हाल ७७ जिल्ला मध्ये ७३ जिल्लामा यो रक्त सञ्चार सेवा बिस्तार भई सकेको छ । अस्पताल एकाई समेत गरि ११६ स्थानबाट सेवाग्राहीहरू लाभान्वित भईरहेका छन् । आवश्यक्तानुसार देशका बाँकी जिल्लाहरूमा पनि यो सेवालाई बिस्तार गर्दै जान ढिलो गर्नु भएन । संगसंगै गुणस्तरीय र प्रभावकारि सेवा प्रदान गर्नबाट चुक्नु हुन्न ।
राज्यपक्ष र सम्बन्धित निकायद्वारा देशको रक्त व्यवस्थापनमा नीतिगत सुधारहरू ल्याउन अविलम्ब एउटा प्रभावकारी कार्यशाला गोष्ठीको समेत आयोजना गर्नमा ढिलाइ गर्नु भएन । यस्तो संबेदनसिल क्षेत्रलाई उपेक्षित बनाई रहनु हुन्न । अति महत्वपूर्ण भूमिका खेलिने यो संबेदनसिल क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ सुधार गर्नु र लागु गर्न तर्फ आफूलाई समर्पित गर्ने हो भने मात्र खोजेको उपलब्धि र उद्देश्यहरू क्रमशः पूरा हुँदै जाने छ । हामी कहाँ बिषयगत समर्पणताका सेवाभाव भएका व्यक्तिहरू न्यून छन् । फलस्वरूप सकारात्मक परिणामुखि हुन सकेका छैनौं ।
हामी कहाँ सञ्चालित रक्त व्यवस्थापनमा सहि नीति र नेतृत्व सहि हुने हो भने नेपालबाट बिश्व सामु एक नमूना रक्त व्यवस्थापन सहितको रक्त सञचार सेवा प्रादुर्भाव गरि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । यहाँ स्वयंसेवी रक्तदाताहरूको उल्लेख्य बृध्दि हुने क्रममा क्रमशः सुधार भईरहेको छ । जुन अपरिहार्य छ । जसको बिकल्प छैन ।
संसारको कुनै पनि राष्ट्रममा रक्त सञ्चार सेवाको काम कुरो कार्यान्वयन गर्नु पर्दा स्वयंसेवी रक्तदाताहरूको भूमिका अहम् हुन आउंदछ । जहाँ स्वयंसेवी रक्तदाताहरूको संख्यामा सोंच राखिन्न , त्यहाँको रक्त सञ्चारको कुरा केवल कोरा कुराको रूपमा मात्र सिमित रहनेछ । यसले कहिल्यै पनि प्रभावकारी तवरले सेवा प्रदान गर्न सकिदैन । स्वयंसेवी रक्तदाताहरूको उपस्थिति नहुने हो भने कोहिपनि बैज्ञानिकद्वारा आविष्कार गरिएका प्रबिधिहरू समेत अर्थहीन बन्न पुग्दछ । रगतले मात्र यिनिहरूको अस्तित्व बोध गराउँदछ ।
हरेक चेतनशील मानवले भनाइ,गराइ,लेखाइ र बुझाइमा व्यवहारिकरण गर्न सर्वत्र आवश्यक छ । यिनलाई ब्यबहारमा उतार्दै समयनुसार कार्य सम्पादन गर्न सकेमा मात्र त्यस क्षेत्र प्रभावकारी ढंगबाट कृयाशील हुनेछ । जसले गर्दा प्रत्यक्ष तवरले उद्देश्यहरूको अनुभुती दिलाउन सक्नेछ ।
हाल देशभर सञ्चालित रक्त व्यवस्थापन पक्षलाई सबैको पहुँचको बिषय बनाइ सफलताका साथ गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नतिर अब कत्तिपनि विलम्ब गर्नु भएन । समयले कसैलाई पर्खने वाला छैन । यस क्षेत्रमा देखिएका कमिकमजोरी र दुर्घटनाको भागेदार स्वयं सरकार तथा सम्बन्धित निकाय नै हुनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ यस क्षेत्रमा देखिएका र गर्नुपर्ने सबैखाले सुधारका कार्यहरू अविलम्ब तदारुकताका साथ थालनी गर्नमा आनाकानी गर्नु भएन । देखिएका समस्याहरूको समाधान पश्चात् सेवाले सार्थकता पउंनेछ ।
आजको यो ५४औं राष्ट्रिय रक्त सञ्चार दिवसले start 18 stars team को अवधारणानुसार आफ्नो १८औं वर्षको जन्म दिनदेखि रक्तदानको शुभारम्भ गरि नियमित निरन्तर रक्तदान गर्नमा थप हौसला र प्रेरणा मिल्दै जाने वातावरणको सृजना सरकार तथा सम्बन्धित निकायले प्रवर्द्धन गर्नमा ढिलाइ नगरी अग्रसर हुन सकोस र स्वयंसेवी रक्तदाता,रक्तदान कार्यक्रम आयोजक संघरसंस्था,आर्थिक,नैतिक,भौतिक रूपमा सहयोग गर्नुहुने तथा सद्भाव राख्नुहुने सबै महानुभावहरू प्रति हार्दिक शुभकामना !
( प्रेमसागर कर्माचार्य